Microsoft Access achọpụtala na Ebe nchekwa data a dị na Steeti na-ekwekọghị ekwekọ
Home ngwaahịa DataNumen Access Repair Microsoft Access achọpụtala na Ebe nchekwa data a dị na Steeti na-ekwekọghị ekwekọ
Ozi zuru ezu banyere "Nweta Microsoft achọpụtala na Database a dị na steeti na-ekwekọghị" Njehie
Mgbe ị na-eji Microsoft Access mepee faịlụ nchekwa data Access mebiri emebi, ị ga-ahụ ụzọ njehie na-esonụ (njehie 9505) na mbụ:
Microsoft Access achọpụtala na nchekwa data a dị n'ọnọdụ na-ekwekọghị ekwekọ, ma nwaa ịnwa iweghachite nchekwa data ahụ. N'ime usoro a, a ga-eme nnomi nchekwa data nke nchekwa data na ihe niile enwetara na nchekwa data ọhụrụ. Willnweta ohere ga-emeghe nchekwa data ọhụrụ. Aha ihe ndị na-enwetaghị nke ọma ga-abanye na tebụl "Njehie Iweghachite".
Nwere ike pịa bọtịnụ "OK" ka Access rụkwaa nchekwa data. Ọ bụrụ na Microsoft Office Access adịghị arụzi nchekwa data mebiri emebi, ọ ga-egosipụta ozi njehie na-esonụ (njehie 2317):
Enweghị ike idozi nchekwa data 'xxx.mdb' ma ọ bụ na ọ bụghị faịlụ nchekwa data Microsoft Access.
ebe xxx.mdb bụ aha ihe rụrụ arụ Access nchekwa data.
nke pụtara na Microsoft Access anwalela nke kachasị mma mana ọ nweghị ike ịrụzi faịlụ ahụ.
Njehie a pụtara na Access Jet engine nwere ike ịmata ntọala dị mkpa yana nkọwa dị mkpa nke nchekwa data MDB nke ọma, mana ịchọta ụfọdụ ekwekọghị na nkọwapụta tebụl ma ọ bụ data tebụl.
Microsoft Access ga-agba mbọ rụkwaa nchekwa data ma dozie ekwesighi. Ọ bụrụ na tebụl nkọwa dị oké mkpa dum nchekwa data-apụghị rụzigharị, ọ ga-egosipụta na n'elu kwuru banyere “The nchekwa data 'xxx.mdb'-apụghị rụziri ma ọ bụ na ọ bụ Microsoft Access nchekwa data faịlụ.” njehie ma wepu ihe mepere emepe.
Nwere ike ịnwale ngwaahịa anyị DataNumen Access Repair imezi MDB faịlụ na idozi njehie a.
Faịlụ rụziri na DataNumen Access Repair: mydb_5_fixed.mdb